Ogaden News Agency (ONA) – Madaxda iyo hawlawdeenka Jaaliyadaha Waqooyi Amerika oo kulan wadatashi ah qabsaday
Madaxda iyo hawlawdeenka Jaaliyadaha Waqooyi Amerika oo kulan wadatashi ah qabsaday
Waxaa shir wadatashi aad muhiim u ah isagu yimid Masuulyiinta G/fullinta JWXO, kuwa G/Dhexe, Dhamaan Maamulada Jaaliyaadka Qaarada Waqooyiga America, Faracyada, Unugyada Iyo Dhamaanba xubnaha kusugan Maraykanka iyo Canada.
Shirkan oo ahaa shir xaga taleefanka loo isticmaalayaay ayaa waxaa soo agaasimay oo isla markaana shir gudoominayay, Madaxa Wakiilka JWXO ee Marakaykanka ENG-Ahmed Mohamed Abdi oo Aayado Qur’aan ah iyo wacdi yar kadib. Sheegay in shirku noqondoono sadex qaybood isagoo xusay in labo qaybood cashiro halgameed meelo badan taabanaya noqondoonaan, halka qaybata kalana ay noqondoonto, Wadatashi iyo Marxalada guud ee halganka .
Qaybta hore oo uu soo diyaariyay soona jeedinayay Dr. Mohamed Rashiid Sheikh Abdullahi oo ah madaxa waxaaxda Abaabulka ee Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka(HAAU) ayaa wuxuu ka hadlay Waajibaadka xubinka, ku sugnaanshaha hadafka iyo Mabaadiida guud ee ururka, isagoo masuulku arimahaa ka hadlayay ayuu usoo qaatay xubnaha Aayado Qur’aan ah iyo Axaadiis uu ku eegaayo muhiimada ay leedahay in waxa qofka muslimka ahi ku dhaartay ama sheeganayo in uu kamid yahay ka runsheego oo uuna qofku noqonin qof aan sugnayn oo labo wajeelayn leh ama wixiiba uusan ka dhab ahayn taas oo qofka muslimka ah diiniyan ufiicnayn, masuulkan ayeey xubnuhu khudbadiisii dheerayd uwada riyaaqeen ayna si fiican udhagaysteen ugana faaiidaysteen.
Qaybta 2aad waxaa isna soo diyaariyay soona jeediyay Dr.Xasan Turki Xussein(Xayle) oo ah Xidhiidhka Arimaha Dibada Ee maraykanka, Masuulkan ayaa isna ka hadlay Cilmi Baadhis Qodo Dheer oo lagu sameeyay Dhaqaalaha Dawlada itoobiya soo gala gudo iyo dibadba iyo dhaqaalaha iyaga gaar ahaan ka soo gala ogadenia iyo kan ay sheegtaan in ay ku maalgaliyaan ogadenia.
Hadaba Cilmi Baadhistan oo ahayd mid aad ufaahfaahsan Khuburo madax banana ay soo qoreen ayaa noqotay mid xubnihii ka fajicisay maxaa yeelay waxay cilmi baadhistani muujisay iska daa lacagta dawlada itoobiya ka soo gasha caalamka oo dhan Ee hadii inta ogadenia ay ka qadaan kaliya ay boqolkiiba toban galinin Ogadeniya oo hadii dakhliga Ogadenia iyaga ka soo gala ay boqolkiiba sodon kaliya (30%) ay galin-lahaayeen dalkeen in maanta wadanka Ogadenia sidan dhaami lahaa. Waxay cilmi baadhistu muujinaysaa in lacagaha Itoobiya loogu deeqo in ay iyagu ku hormarsadeen deegaanadoodo kuna qabsadaan danahooda gaarka ah oo ka baxsan sidii deeq bixiyayaashu ugu tala galeen in deeqahaa loo isticmaalo. Hadaba cilmi baadhistan oo masuulka ay warbaahintu ka codsatay ayuu usoo Gudbiyay waxaana lafilayaa in si dag-dag ah loo soo daabici-doono oo warbaahinta loo qaybindoono.
Masuulkan JWXO ayaa Hadalkiisii kadib xubnahu iyo maamuladu su’aalo waydiiyeen, dhamaana si wanaagsan ayuu uga jawaabay.
Qaybta 3aad oo ahayd qaybtii wadatashiga iyo Marxaladaha guud ee halganka ayaa waxaa soo diyaariyay,Doodana Qaybinayay Madaxa Wakiilka JWXO Ee Maraykanka Eng.Ahmed Mohamed Abdi oo ugu horayn dhankiisa dooda wadatashiga furay qaabkay usoconaysana sheegay maadaama ay boqolaal xubnaha ku jireen khadka taleefanka oo ay suurtawday in uuna hadalku wada gaadhin maamulada qaarada oo dhan.
Doodan oo taabanaysay meelo badan ayaa waxaa la isla lafa-guray arimo badan, oo ay kamidtahay siyaasada,dhaqaalaha,ciidamada,xeerarka iwm. Doodan oo ahayd mid caafimaad qabta dhamaan Maamuladuna ay qayb kawada qaateen ayaa waxay ugu danbayntii kusoo dhamaatay si guul ah arimo badana la isla qaatay.
Shirkan oo socday mudo ku dhawaad 5 saac ah ayaa waxuu ku soo dhamaaday jawi wanaagsan iyagoo Maamuladu ay codsadeen shir noocan oo kala aha Bil walba loo qabto ayna aad ugu mahadceliyeen Madaxa Wakiilka JWXO Ee maraykanka Eng. Ahmed Mohamed Abdi oo isagu shirkan soo agaasimay.
Waxaa la isla qaatay in dhamaan maamulada Maraykanka iyo Canada ay si iskumid ah uga wada hortagaan borobagaanda beenta qaawan ah ee cadawgu waa itooyibee rabto in uu ummada somaaliyeed ku siro iyadoo raadinaysa qaybi oo xukun oo dhamaan xubnuhu ay isla fahmeen inta wiilka Raanta-leh ee ONLF Noolyahay in fikirkaasi suurta-gal itoobiya unoqon-doonin oo ogadenia iyo somaliyaba kadifaaci-doonaan cadawga ummada somaliyeed Ee itoobiya.
Waxayna ugu baaqeen in ummada somaaliyeed guud ahaan ka feejignaadaan dabinada uu maleegayo cadawga taariikhiga ah ee itoobiya.